Lomano – JIOI: eny Soavina ny fampivondronana | NewsMada
Lomano – JIOI: eny Soavina ny fampivondronana
Par Taratra sur 25/05/2019
Manaraka fampivondronana eny amin’ny dobo filomanosana eny Soavina, nanomboka ny alakamisy lasa teo ireo atleta malagasy hiatrika ny lalaon’ny Nosy, hatao any Maorisy, ny volana jolay ho avy izao.
Ny federasiona malagasy ny taranja lomano no miantoka tanteraka ny lany rehetra amin’ity fampivondronana ity, raha ny fanazavan’ny filohan’ny federasiona, Jeneraly Ramanantsoa Gabriel. Marihina, tsy isan’ireo taranja nanaraka ny fampivondronana voalohany ny lomano, ka tokony honeran’ny Minisitera izay ho anjaran’izy ireo tamin’izany hiantohana ity fampivondronana faharoa ity. Etsy ankilany, noho ny tsy fisian’ny dobo filomanosana mafana natokana hanaovana ny fanazaran-tena, nisafidy ny hanofa toerana an’olon-tsotra, eny Soavina, ny federasiona hahafahan’ireo atleta miatrika ny fampivondrona manaraka ny fenitra sy ara-dalana tsara.
Valo mianadahy ho any Sina
Eo amin’izay fanomanan-tena izay hatrany, raha toa ka enina mianadahy no fantatra fa hihazo an’i Sina hanohy ny fanazaran-tena, niakatra ho valo mianadahy izany, raha ny isa navoakan’ny Minisitera. Naneho fisaorana manokana ny MJS ny filohan’ny federasiona ny amin’ity vaovao tsara ity. Tsara ny manamarika, afaka roa herinandro no hanomboka ity fiofanana any Sina ity. Miverina eto an-tanindrazana izy ireo, 10 andro mialohan’ny handehanana any Maorisy. Fantatra kosa fa nihena ny isan’ny handeha JIOI, raha ny fanazavana nentin’i Jeneraly Ramanantsoa Gabriel hatrany. 5 lahy sy 5 vavy izy ireo no hiaro ny voninahi-pirenena any Maorisy.
Ankoatra ny lalaon’ny nosy, fifaninanana iraisam-pirenena maro no mbola miandry ny ekipam-pirenena malagasy. Mifanindry an-dalana amin’ny JIOI ny fiadiana ny tompondaka eran-tany, taranja lomano, hatao any Korea Atsimo izay handraisan’i Madagasikara anjara. Efatra mianadahy no hiatrika izany, i Tendrinavalona sy i Murielle, manaraka fiofanana any Thailande, ny sokajy vehivavy. I Jonathan sy i Mickael, mianatra any Inde kosa ny lehilahy. Hiatrika ny lalao olympika, amin’ny taona 2020, any Tokyo izay mianadahy mendrika amin’izy efatra ireo, raha ny nambaran’ny filohan’ny federasiona. Hatreto, fanasana avy amin’ny federasiona iraisam-pirenena hatrany no hahafantsika mandray anjara amin’ireny fifaninanana eran-tany ireny, raha ny fanazavana hatrany.